Mabasa 18 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
18 Pashure pezvinhu izvi akabva muAtene, akaenda kuKorinde. 2 Akawana mumwe muJudha ainzi Akwira,+ wokuPontasi akanga achangosvika achibva kuItari,+ nomudzimai wake Prisira, nokuti Kraudhiyo+ akanga arayira vaJudha vose kuti vabve muRoma. Naizvozvo akaenda kwavari 3 uye akagara pamba pavo nokuti vaiita basa rakafanana nerake, uye vakashanda,+ nokuti basa ravo raiva rokugadzira matende. 4 Zvisinei, aikurukura musinagogi+ masabata ose uye ainyengetedza vaJudha nevaGiriki. 5 Zvino, Sirasi+ naTimoti+ pavakasvika vachibva kuMakedhoniya, Pauro akatanga kubatikana kwazvo nokuparidza shoko, achipupurira kuvaJudha kuti avaratidze kuti Jesu ndiye Kristu.+ 6 Asi pashure pokunge varamba vachishora vachimutuka,+ akazunza+ nguo dzake, akati kwavari: “Ropa renyu+ ngarive pamisoro yenyu. Ini ndakachena.+ Kubvira zvino ndichaenda kuvanhu vemamwe marudzi.”+ 7 Naizvozvo akabva ipapo, akanopinda mumba momunhu ainzi Titiyo Justo, ainamata Mwari, aiva neimba yakanga yakabatana nesinagogi. 8 Asi Krispo+ mukuru aitungamirira sinagogi akatenda munaShe, uye ndizvo zvakaitawo imba yake yose. VaKorinde vazhinji vakazvinzwa vakatanga kutenda, vakabhabhatidzwa. 9 Zvakare, usiku Ishe akati kuna Pauro+ pane zvaakaratidzwa: “Usatya, asi ramba uchitaura uye usaramba wakanyarara, 10 nokuti ndinewe+ uye hapana munhu achakurwisa kuti akuitire zvinokuvadza; nokuti ndine vanhu vazhinji muguta rino.” 11 Naizvozvo akagara ari ipapo kwegore nemwedzi mitanhatu, achidzidzisa shoko raMwari pakati pavo. 12 Zvino Gariyo paakanga ari mutongi+ weAkaya, vaJudha vakamukira Pauro nomwoyo mumwe, vakamuendesa kuchigaro chokutonga,+ 13 vachiti: “Munhu uyu ari kunyengetedza+ vanhu kuti vanamate Mwari zvinopesana nomutemo.” 14 Asi Pauro zvaakanga ava kuda kushama muromo wake, Gariyo akati kuvaJudha: “Haiwa vaJudha, chokwadi kudai changa chiri chinhu chisina kururama kana chakaipa choushati, ndaizova nechikonzero chokukushivirirai kwazvo. 15 Asi kana dziri nharo pamusoro pemashoko nemazita+ nomutemo+ wenyu, imi munofanira kuzvitarisira. Handidi kuva mutongi wezvinhu izvi.” 16 Akabva avadzinga pamberi pechigaro chokutonga. 17 Naizvozvo vose vakabata Sositenesi+ mukuru aitungamirira sinagogi, vakatanga kumurova vari pamberi pechigaro chokutonga. Asi Gariyo haana hake kumbova nehanya nezvinhu izvi. 18 Zvisinei, pashure pokugara mamwe mazuva mazhinji, Pauro akaoneka hama, akabva aenda nechikepe kuSiriya, uye Prisira naAkwira vaiva naye, bvudzi romusoro wake zvarakanga radimburirwa+ muKenkreya,+ nokuti akanga aita mhiko. 19 Naizvozvo vakasvika kuEfeso, akavasiya ipapo; asi iye akapinda musinagogi,+ akakurukurirana nevaJudha. 20 Kunyange zvazvo vakaramba vachimukumbira kuti agare kwenguva refu, haana kubvuma 21 asi akaoneka,+ akavaudza kuti: “Ndichadzokazve kwamuri, kana Jehovha achida.”+ Akabva muEfeso, akapinda mugungwa, 22 akasvika kuKesariya. Akakwira, akanokwazisa ungano, akazoburukira kuAndiyoki. 23 Pavakapedza nguva yakati kuti ikoko, akabva, akaenda nzvimbo nenzvimbo nomunyika yeGaratiya+ neFrijiya,+ achisimbisa+ vadzidzi vose. 24 Zvino mumwe muJudha ainzi Aporo,+ wokuArekizandriya, aiva nyanzvi pakutaura, akasvika muEfeso; uye ainyatsoziva Magwaro.+ 25 Murume uyu akanga arayiridzwa nzira yaJehovha achiita zvokutaurirwa nomuromo uye, zvaakanga achipisa nomudzimu,+ akatanga kutaura nokudzidzisa nenzira yakarurama zvinhu zvine chokuita naJesu, asi aingoziva rubhabhatidzo+ rwaJohani chete. 26 Murume uyu akatanga kutaura noushingi musinagogi. Prisira naAkwira+ pavakamunzwa, vakamutora, vakava naye, vakamutsanangurira nzira yaMwari zvakanyatsorurama. 27 Uyezve, nokuti aida kuyambukira kuAkaya, hama dzakanyorera vadzidzi, dzichivarayira kuti vamugamuchire nomutsa. Naizvozvo paakasvika ikoko, akabatsira kwazvo+ vaya vakanga vatenda nokuda kwomutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari;+ 28 nokuti nesimba akaratidza kwazvo vaJudha pachena kuti vakanga vasina kururama, asi achiratidza neMagwaro+ kuti Jesu ndiye aiva Kristu.+